Argagixiso - BBC Somali
Boko Xaram oo kordhisay isticmaalka caruurta
Hayadda Qaramada Midoobay ee daryeelka caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in Boko Xaraam kordhisay caruurta ay u isticmaasho weerarka is qarxinta.
12 Abriil 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Boko Xaram oo kordhisay isticmaalka caruurta
Garoonka Zaventem oo dib loo furayo
Garoonka Brussels ayaa la qorshaynayaa in qayb ahaan dib loo furo maanta oo Axad ah.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Garoonka Zaventem oo dib loo furayo
Hal sano ayaa laga joogaa weerarkii Gaarisa
Maanta hal sano ayaa laga joogaa markuu dhacay weerarkii jaamacadda Garissa oo lagu dilay 149 qof oo badankooda ay ahaayeen ardey.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Hal sano ayaa laga joogaa weerarkii Gaarisa
US oo tababaraya dagaalyahannada mucaaradka Suuriya Milateriga Maraykanka ayaa sheegay inuu bilaabayo inuu tababaro tiro daraasiin ah oo ka tirsan dagaalyahannada mucaaradka Suuriya oo uu filayo inay ka hor tagaan kooxda Dawladda islaamiga.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan US oo tababaraya dagaalyahannada mucaaradka Suuriya Saalax Cabdisalaam oo loo dhoofin doono Paris Xafiiska dacwad oogaha Beljam ayaa ogolaaday in Saalax Cabdisalaam oo ah ninka kaliya ee ka nool dadkii qaaday weerarradii ka dhacay Paris loo dhoofin karo Faransiiska, taasoo ah sidii uu isagu doonayey.
1 Abriil 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Saalax Cabdisalaam oo loo dhoofin doono Paris Tababar gargaarka deg degga oo ka dhacay Paris
Ku dhawaad 3000 oo qof ayaa ka qayb galay tababarro gargaarka deg-degga oo lacag la'aan ah oo ka dhacay magaalada Paris.
27 Maarso 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Tababar gargaarka deg degga oo ka dhacay Paris
Ciidamada Suuriya oo la wareegay Palmyra
Ciidamada dawladda Suuriya ayaa dagaal kula wareegay magaalada qadiimiga ee Palmyra, sida ay ku warantay warbaahinta dawladda Suuriya. 27 Maarso 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Ciidamada Suuriya oo la wareegay Palmyra
Dagaal u dhexeeya dawladda Suuriya iyo kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ayaa ka dhacay gudaha iyo agagaarka Palmyra.
26 Maarso 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Dagaal ka dhacay magaalada Palmyra
Garoonka Brussels oo dib loo furi doono
Masuuliyiinta dalka Belgian ayaa sheegay in aanay dib u furi doonin garoonka dayaaradaha ee magaalada Brussels illaa maalinta talaadada.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Garoonka Brussels oo dib loo furi doono
Walaalo ka danbeeyay qaraxa Brussels
Khalid iyo Brahim el-Bakraoui oo walaalo ah oo u dhashay Belgium ayaa qaaday weerarkii isqarxinta ee shalay lagu qaaday Brussels.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Walaalo ka danbeeyay qaraxa Brussels